Sida aan uga shaqeyno Mifreidorasinaceite
Waa maxay sababta aan u aamino hagayaashayada iyo talooyinkeena? Waxaan aaminsanahay in sida ugu wanaagsan ee aad kalsoonidaada ku kasban karto ay tahay si cad oo hufan ku tusi sida aan u shaqayno. 🙂
Tallaabada 1: Waxaan baadhnaa Alaabta
Si aad u bilawdo, barnaamijyo kombiyuutar oo kala duwan ayaanu ku soo ururinnaa alaabta Iibinta ugu fiican iyo loogu doonista badnaa waddankeena
Tallaabada 2: Waxaan falanqeyneynaa Tilmaamaha
Tilmaamaha ayaa laga hadlayaa farsamooyinka badeecad kasta oo is barbar dhig iyaga oo tixgelinaya qiimahooda.
Guud ahaan falanqayntan ayaa la sameeyaa isticmaala caadiga ah ee alaabta ama xataa dad gaar ah qaybta.
Haddii shaki ka yimaado qeexida mid kasta si toos ah ula xiriir astaanta taas oo soo saarta si ay u codsato macluumaadka.
Marxaladdan waxaan iska tuuraynaa alaabooyinkooda gaar ahaan ama qiimahooda lacagtu ay tahay aad uga hooseeya inta kale.
Tallaabada 3: Qiimaynta badeecadaha iyo summada
Waxaan baranaa summadaha si aan u ogaano kooda waayo-aragnimada qaybta, dammaanadaha la bixiyo, haddii ay iibiyaan spare parts oo ay haystaan SAT ee Spain, halka ay wax soo saarka iyo wax kasta oo aan soo ururin kartaa si ay u barbar dhigaan iyaga u dhexeeya.
Intaa waxaa dheer, waxaan falanqeyneynaa isbeddellada koritaanka mid kasta iyo qiimeynta ay sameeyaan isticmaalayaasha, khubarada warshadaha iyo marinnada gaarka ah.
Hababka loo isticmaalo in lagu ogaado qiimaynta isticmaalayaasha alaabadu waa:
Shakhsi ahaan tijaabi qaar ka mid ah kuwa aan falanqaynay
La xiriirida isticmaalayaasha gaarka ah ee isticmaala
Siinta qaar ka mid ah khubarada qaybta si ay u qiimeeyaan si hufan.
La xidhiidh si aad u noqoto tijaabo
Haddii aad leedahay blog, kanaalka YouTube, astaanta bulshada, iwm.. ee la xidhiidha cunto karinta, waxaad isku dayi kartaa mid ka mid ah shiilanyada. nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah
Muujinta kama dambaysta ah
Mifreidorasinaceite.com waxaan leenahay go'aan adag oo ah inaan had iyo jeer kugula talineyno maqaallada Waxaan runtii tixgelineynaa kuwa ugu fiican suuqa.
Waxaan samaynaa falanqaynta ka hor inta aan dooran iyaga, had iyo jeer isku dayaya in la helo kuwa bixiya natiijooyin wanaagsan oo kala duwan oo qiimo leh.
Waxaa jira koror sii kordheysa ee dhammaan qaybaha iyo samaynta gadashada wanaagsan waxay noqon kartaa mid adag. Waxaan wax ka iibsaneynay khadka internetka in ka badan 15 sano waxaanan haysanaa qalabka lagama maarmaanka ah iyo waayo-aragnimada si aan u samayno doorashada saxda ah ee alaabooyinka buuxiya baahida celceliska isticmaalaha.
Waxaan jecelnahay inaan horumarino oo aan ogaano haddii aan ku caawinnay sidaas darteed faallooyinka waa la soo dhaweynayaa, na sii hal daqiiqo 🙂
Waad ku mahadsan tahay kalsoonidaada
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Sida aan uga shaqeyno Mifreidorasinaceite
1 faallo ku saabsan "Sida aan uga shaqeyno Mifreidorasinaceite"
19 / 10 / 2020 at 01: 39
Waxaan dooranay priince xxl hawada fryer, kaliya waxaan joognay 1 usbuuc ilaa hadda, si fiican, aan rajayno inay si fiican u socoto.